Chinese Zodiac yaBantwana | Funda ngesiTshayina kubuntu babantwana beZodiac kunye neempawu! - Iimpawu Zezodiac
I-Zodiac yamaTshayina yaBantwana
Uphawu lomntwana wakho lwaseTshayina lweZodiac lunokukunceda utyhile iimfihlakalo ezijikeleze ubuntu babo, iimpawu kunye neempawu zabo. Ukwazi isilwanyana seTshayina seZodiac somntwana wakho sikunika itshathi yeenkwenkwezi onokuthi ubancede ngayo baphile ubomi kumahla ndenyuka. Into oza kuyifumana malunga 'nezizathu' zabantwana bakho ezifunayo, iimfuno, amaphupha, abangazithandiyo, kunye nezinto abazithandayo zinokukunika izixhobo ezingaphezulu zokuba ngumzali onokuzisebenzisa ukuxhasa, ukomeleza kunye nokukhuthaza unyana okanye intombi yakho.
Isinyathelo sokuqala, kunjalo, ukufumanisa ukuba yintoni uphawu lweTshayina lweZodiac oluhambelana nomhla wokuzalwa komntwana wakho. Umjikelo we-China Astrology wahlukile kancinane kune-Western Zodiac. Apho inkqubo yaseNtshona inezijikelezo zenyanga ezili-12, amaTshayina anomjikelo weminyaka eli-12, nganye ibizwa ngegama lesilwanyana esahlukileyo.
Nalu ushwankathelo olufutshane ukuze uqalise:
Impuku: Ngo-1996, ngo-2008, ngo-2020
Ox: Ngo-1997, 2009, ngo-2021
Ingwe: Ngo-1998, 2019, 2022
Umvundla: Ngo-1999, 2011, 2023
Inyoka: 2000, 2012, 2024
Inyoka: 2001, 2013, 2025
Ihashe: 2002, 2014, 2026
Ibhokhwe: Ngo-2003, 2015, ngo-2027
Inkawu: Ngo-2004, 2016 no-2028
Umqhagi: 2005, 2017, 2029
Inja: Ngo-2006, ngo-2018, ngo-2030
Ihagu: Ngo-2007, 2019, 2031
Ngelixa olu gqabantshintshi lulula kuba Abavumisi ngeenkwenkwezi baseTshayina bajonge nakwinyanga kunye neyure yokuzalwa kwakho, enika ubunzulu obukhulu. Ke cinga ngolwazi apha njenge-primer onokuthi uqokelele iinkcukacha ngakumbi njengoko uqhubeka.
Umntwana waseTshayina weZodiac
Unyaka weNja yaBantwana: I-Chinese Zodiac Dog Traits zaBaNtwana, ubuNtu kunye neMpawu zoNyaka wokukhonkotha kweNja ...
Umntwana waseTshayina weZodiac Dragon
Unyaka weDragoni yaBantwana: AmaTshayina amaZodiac Dragon Iimpawu zaBantwana, Ubuntu kunye neempawu zabantwana nakubantu abadala ngokufanayo ...
Umntwana waseTshayina weZodiac Horse
Unyaka weHashe laBantwana: I-Chinese Zodiac Horse Traits zaBantwana, ubuNtu kunye neMpawu zokukhwela ihashe nge-7th ...
Umntwana waseTshayina weZodiac Monkey
Unyaka weNkawu yaBantwana: AmaTshayina amaZodiac Monkey Iimpawu zaBantwana, uBuntu kunye neMpawu xa uphawu lwethoba ...
Umntwana waseTshayina weZodiac Ox
Unyaka we-Ox yaBantwana: I-Chinese Zodiac Ox Traits zaBantwana, uBuntu kunye neempawu ze-Ox sisilwanyana sesibini ...
Ingulube yaseTshayina yeZodiac okanye uMntwana weBhokhwe
Unyaka wehagu yaBantwana: I-Chinese Zodiac pig pig Traits, Ubuntu kunye neempawu amaTshayina athathela ingqalelo ihagu ...
Umntwana waseTshayina weZodiac Rabbit
Unyaka woMvundla waBantwana: I-Chinese Zodiac Rabbit Traits zaBantwana, uBuntu kunye neMpawu zomntwana ozelwe kwi ...
Umntwana waseTshayina weZodiac Rat
Unyaka weRat yaBantwana: I-Chinese Zodiac Rat Traits yabantwana, Ubuntu kunye neempawu zoNyaka weRat ...
Umntwana waseTshayina weZodiac Rooster
Unyaka weQula labaNtwana: Iimpawu zoMntwana waseTshayina weZodiac, ubuNtu kunye neMpawu zoQeqesho kwizilwanyana zaseTshayina ...
Umntwana waseTshayina weZodiac Sheep
Unyaka weegusha zaBantwana: I-Chinese Zodiac Sheep Sheats Traits, Ubuntu kunye neempawu zoNyaka weeGusha ...
Umntwana wase-Chinese Zodiac Snake
Unyaka wenyoka yaBantwana: I-Chinese Zodiac Snake Traits yaBantwana, ubuNtu kunye neMpawu yeNyoka iyavela kwi-6th ...
Umntwana waseTshayina weZodiac Tiger
Unyaka weTiger yaBantwana: Imikhwa yabantwana baseTshayina yeZodiac Tiger, ubuNtu kunye neMpawu zoNyaka weZilwanyana waseTshayina ...
Izilwanyana ze-Zodiac zaseTshayina eziyi-12
Impuku yamaTshayina yeZodiac / iMouse yeMntwana
I-Rat's element ngamanzi kwaye iza phantsi kolawulo lwe-Yang, okanye i-Universal Masculine. Ukusukela kusuku olunye iRat ibonisa umtsalane othile obamba wonke umntu engalindelanga. Bangabantwana abathandekayo ngenene kwaye abathandabuzi ukuveza iimvakalelo zabo elubala.
Ngelixa konke kulungile kwaye kulungile, xa isimilo esihle seRat singabonakali ngendlela ababenethemba ngayo, lungela iqhinga elilandelayo. Impuku zinokukhala, zilawule izilwanyana zasekhaya okanye abanye abantwana okanye zibambelele, zifuna yonke into oyithathele ingqalelo. Abazali abangayaziyo le nto babambeka ekunikezeleni iRat encinci kanye le nto bebeyifuna, kwaye uya kuziva ulungile ngayo!
Iirati ezininzi zinolawulo kunye noxinzelelo kwimicimbi. Ngelixa phezulu Rat yomntwana kubonakala ngathi yonke ilanga kunye ne-lollypops, unengcinga enzulu ezandleni zakho. Iingqondo zabo azipheli, kwaye oku kuhlala kukhokelela ekwenziweni kweentaba ngesuntswana lothuli. Ukufunda ukulawula olo tyekelo yeyona mingeni mikhulu ajongene nayo umntwana wakho.
Ezinye izinto phakathi kwabantwana beRat zibandakanya ubunkokeli, amandla anamandla, izakhono zokulwa imeko kunye nolawulo olomeleleyo lolawulo lwemali nje ukuba izibalo zingene emfanekisweni. Phakathi kwezinye, iRat ngumhlobo ozinzileyo, ngakumbi u-Ox kunye neDragoni, abathi ngokudibeneyo bapelise ingxaki.
Cofa ukuze ufunde ngakumbi ngobuntu, iimpawu, kunye neempawu ezikwi Umntwana waseTshayina weZodiac Rat .
Abantwana be-Ox banento emiselweyo yamanzi kunye ne-Yin, okanye imeko yabasetyhini. Ummangaliso we-Ox kukuba aba bantwana bahlala ekhosini ngaphandle komdlalo weqonga. Kubonakala ngathi banamandla abantu abathathu abadala kunye nesivumelwano esihle sokuzazi.
Oku kuthetha ukuba kufuneka ufundiswe kwangethuba ukuba ngubani omele amamele kwaye ngubani ongazamiyo ukunceda. Nokuba kwenzekile, aba bantwana banzima njengezikhonkwane ngaphandle, kodwa banokuzifihla ngaphakathi ngaphakathi.
Inkunzi yenkomo isempilweni kakhulu. Uya kukhula abe ngumsebenzi onzima, ozimiseleyo nokuba yeyiphi na iprojekthi. I-Ox inamandla kunye nokukwazi ukubona izinto.
Ezinye iimpawu ezinxulunyaniswa nabantwana be-Ox zibandakanya umonde, ukuthembeka, ukuthozama, ukusebenza, isiko, ububele bentliziyo kunye nokuqhelekileyo. Abantwana be-Ox bahlala betsala ibuzi, inyoka kunye nomqhagi njengabadlali.
Cofa ukuze ufunde ngakumbi ngobuntu, iimpawu, kunye neempawu ezikwi Umntwana waseTshayina weZodiac Ox .
IsiTshayina Zodiac Tiger abantwana bathwala iinkuni kunye namandla eYang. Iintsapho zilungele i-madcap adventure kunye nalo mntwana. Amahlosi athandana nolonwabo, amanye awo uwafumana emanzini ashushu. Abahlobo kunye nosapho ngokufanayo bayathandwa yi-Tiger's charisma kunye notyekelo lwakhe lokuthambisa imbongi malunga nethemba elizayo kunye nezicwangciso.
I-Tiger igcwele ukuzithemba. Akukho nto inyanzelisa uboya bakhe. Lo mntwana ufuna (kwaye ufuna) uninzi lomzimba. Iimbaleki zendalo kwaye oku kuzimisela kunika iTiger indlela yokuchitha amanye ala mandla ahlaziyayo.
Ingwe ngumntwana onothando kakhulu kodwa ngaphandle kwemida. Le kati ikati ifuna abanye ababonakala ngathi banyathelwe okanye benzakaliswe, kwaye bayabakha. Ke ukwenza oko kuyaqhubeka ukomeleza i-Tiger ego esempilweni. Xa ungalungisi umhlaba, uTiger uthanda i-adventure elungileyo kunye nokuqhula.
Ezinye iimpawu zomntwana weTiger zibandakanya ubuntununtunu, isibindi, ukungabi namonde, uthethe kakuhle, uzimisele (okanye unenkani, okanye zombini!), Intliziyo yothando kunye nokuzithemba.
Cofa ukuze ufunde ngakumbi ngobuntu, iimpawu, kunye neempawu ezikwi Umntwana waseTshayina weZodiac Tiger .
Abantwana baseTshayina beZodiac Rabbit banenxalenye yeYin kunye nenxalenye yeWood. Lo mntwana uthobela isiphoso. Ungamsa naphi na ngaphandle kokukhathazeka ngohlobo oluthile lomsindo. Ufunda imikhuba ngokukhawuleza kwaye ayisebenzise ngokufanelekileyo.
Abazali bakaMvundla kufuneka baqonde ukuba uneemvakalelo ezinzulu kunye nemvakalelo yokuzibophelela. Uyazi ukuba kulindeleke ntoni kwaye nini. Xa efunda ukusebenzisa obu buchule, angangcangcazela umzi ngokwemiba ye-dynamics. Ukuba oku kubethwa ngobuhlakani bobukrelekrele kusilele, kubonakala kungabalulekanga kwisikimu esikhulu sezinto.
injani indawo emhlabeni elangeni
Umvundla uqhuba kakuhle esikolweni kwaye ufumanisa ukuba kulula ukwenza abahlobo. Uzalelwe ngethamsanqa kumqondiso wakhe kunye nokudibana okungagungqiyo. Usebenza ngokugqibeleleyo ngehagu, iigusha kunye nenja.
Olunye uphawu oluqhelekileyo lomntu ongumqondiso waseTshayina woMvundla kubandakanya ububele, ubuchule, ubabalo, isigqibo, ubunyani, ukujonga kunye nokubamba nje imfihlakalo ephoswe kuyo ukuze ihlale inomdla.
Cofa ukuze ufunde ngakumbi ngobuntu, iimpawu, kunye neempawu ezikwi Umntwana waseTshayina weZodiac Rabbit .
AmaTshayina amaZodiac Dragon abantwana banenxalenye yeYin kunye ne-Element yeWood. Iidragons ziintambo ezibukhoma (njengoko unokulindela). Inamba ihlala icinezela phambili, ibonakala ingenaloyiko. Lo mntwana unamandla, kwaye ubonakala ngathi uhleli emva kwemfuno enye emva kwenye engaze akhathazeke malunga neeKnights ezingahleliwe.
Umntwana oyinkwenkwe unqwenela ukuhlonitshwa nokunyaniseka. Ufuna abantu ababonwa njengabanamandla kwaye bazinikele kwinjongo ethile yamaqabane. Nangona kunjalo, ungowokuqala ukukhusela indawo yokudlala nxamnye nomxhaphazi. Akanyamezeli ukungabikho kokusesikweni.
Dragon abantwana baphumelela uxanduva. Ibenza bazive bethembekile kwaye babalulekile. Qiniseka ukuba uyamdumisa, nangona kunjalo, ngenxa yezenzo ezigqityiweyo. Umsebenzi wakhe unyanisekile, nokuba kukho impazamo. Ufuna ukuba yintshatsheli yosapho kuzo zonke izinto ezinkulu nezincinci.
Ezinye iimpawu eziqhelekileyo kwi-Dragon zibandakanya ukungahambelani, ukuba nomtsalane, ukungxama, ukwenza izinto ezintsha, ukuthetha, ukungabi nangqondo kunye nokucaca (kunzima kakhulu kwiDragoni ukufihla nantoni na - ubuso bayo bufana nencwadi). Abahlobo abalungileyo beNyoka yiMonkey, iRat kunye neNyoka.
Cofa ukuze ufunde ngakumbi ngobuntu, iimpawu, kunye neempawu ezikwi Umntwana waseTshayina weZodiac Dragon .
I-Chinese Zodiac Snake yabantwana ithwala imeko ye-Yin kunye nomlilo. Hlalani nilungile bazali, inyoka ngumntwana onzima kakhulu. Krelekrele kakhulu kwaye uhlakaniphile, iqwalasela ngenyameko phantse yonke intshukumo ebomini.
Iinyoka zigcinwe ngandlela thile kwiimvakalelo zazo kwaye zinomdla wokukhathazeka kakhulu. Uya kuhlala eneenjongo eziphezulu, kodwa kuya kufuneka uncede uyile isicwangciso sempumelelo. Umntwana weNyoka unokuba yinkokeli enobuchule kuba uyaliqonda icala ngalinye kubalo. Idityaniswe netalente ebalaseleyo yendalo, abantu bafuna inyoka ngaphandle njengabahlobo.
Njengakwindalo, abantwana beNyoka ngamanye amaxesha baphalaza ulusu lwabo kwaye bakhule babe yinto entsha. Utshintsho lunokuba luncinci okanye lube lukhulu, kodwa luza kuza. Abazali kufuneka bakulungele ukwamkela olo tshintsho kwaye bahlengahlengise izakhono zabo zobuzali ngokufanelekileyo.
Amagama aphambili anikezelwe kubuntu benyoka aquka eyimfihlakalo, enobukrelekrele, yokuziqhelanisa, enobukrelekrele, enoxolo, ekhuselweyo kunye nokuzimela. Abahlobo benyoka baquka uMqhagi kunye ne-Ox, kunye nomzala omkhulu wenyoka- igongqongqo.
Cofa ukuze ufunde ngakumbi ngobuntu, iimpawu, kunye neempawu ezikwi Umntwana wase-Chinese Zodiac Snake .
Abantwana abazalwe ngonyaka wehashe bane-Yang kunye ne-Element of Fire. Ihashe lihlala lihamba lisoloko likhangela i-adventure entsha. Unesimo sokuziphatha kakhulu kunye nothando lwabemi beNdalo. Abazali banokufumanisa ukuba banengxaki yokulawula kwiHashe ngakumbi xa engafumani ndlela yakhe.
Kunye nosapho kunye nabahlobo ngokufanayo iHashe liyonwabisa. Uqhubela phambili ngamanqaku omhlaba ngaphambili kuninzi lwabantwana. Ukwanayo nendalo engxamisekileyo enokubambisa abahlobo kwindawo evuthayo enesiphelo esithandabuzekayo.
Abantwana bamahashe basombulula iingxaki xa bebuza umbuzo 'ndiwulungisa njani?'. Akukho nanye kwizinto ezintsonkothileyo, ihashe linciphisa nawuphi na umbuzo kwesona sisombululo silula. Ungayithemba intuition yomntwana wakho weHashe (ngakumbi jonga indlela abaphendula ngayo kubantu abatsha kubomi bosapho lwakho).
Iimpawu eziqhelekileyo zehashe zibandakanya ukungabi namandla, umtsalane, amandla amakhulu, ukukhululeka, ubukrelekrele, ukuzithemba, ukunganyaniseki, ukungahambelani kunye nembaleki. Abahlobo abalungileyo beHashe ziiNgwe kunye nenja.
Cofa ukuze ufunde ngakumbi ngobuntu, iimpawu, kunye neempawu ezikwi Umntwana waseTshayina weZodiac Horse .
Isitshayina I-Zodiac Iigusha zabantwana zilungile, zilungile iingelosi. Bafuna okona kulungileyo kuyo yonke into ephilayo. Ngapha koko, banentliziyo ethambileyo banokuziva benovelwano ngeli litye likhalwayo. Umntwana wakho ubona ubuhle kuyo yonke indawo kwaye wabelana ngalo mbono ngokukhululekileyo. Ngokwenyani inxenye yomcimbi wezimvu kukuba naye ubona ububi kwaye akaqinisekanga ukuba uyenza njani loo nto.
Iigusha ziyalandela. Bathanda omnye umntu ophetheyo. Ukuba semngciphekweni kwabo okuvulekileyo kutsala abantu, kwaye ngethamsanqa uninzi lwabo abasebenzisi. Ngokwenyani zonke iigusha zinqwenela ukwamkelwa ngaphandle koxinzelelo olulindelweyo kunye nokhuseleko.
Njengabazali, kubalulekile ukukhulisa izakhono zakho zonxibelelwano kwiiGusha ezibuthathaka. Igama elirhabaxa ngexesha elingalunganga likhokelela kwiiyure zokulila okanye ukubuyela umva ngokupheleleyo ekuqokeleleni uboya. Le retreat ikhusela iigusha kwilizwe elihlala linoburhalarhume. Logama nje iziseko zobomi zifumaneka, iigusha ziziva zisekhaya.
Iimpawu eziqhelekileyo kubantwana beeGusha zibandakanya imfesane, uxolo, uthando, ukuxolela, ukudala, ukunyaniseka, ukuthula, ukungazi kakuhle kunye nokunceda. Okulungileyo, ukukhusela amaqabane akho kubandakanya iTiger, ihagu kunye nehashe.
Cofa ukuze ufunde ngakumbi ngobuntu, iimpawu, kunye neempawu kwi Umntwana waseTshayina weZodiac Sheep .
Amantshontsho amaTshayina e-Zodiac Monkey aphethe imeko yeYang kunye ne-Element of Metal. Uyalazi ibinzana elidala elithi 'inkawu iyakhanya'? Ewe, ziqhelanise nezinto ezininzi ezijolise kakuhle kulo mntwana. Inkawu liqhinga kwaye inobukrelekrele bokuyila amacebo amakhulu. Uthanda umngeni olungileyo kwaye uzimisele ngokupheleleyo ukuphumelela kuyo nantoni na ayithathayo.
Inkawu abantwana bajolise kwinjongo. Oku kunceda kakhulu xa ubakhuthaza ukuba bagqibezele imisebenzi yasekhaya. Qiniseka ukuba unika uNkawu indumiso ngale misebenzi yenziweyo. Uya kuphuma ngolonwabo kunye nolona ncumo lukhulu ulufunayo.
Abazali beMfene banokufumana amandla akhe edinisa. Ukufumanisa kunzima ukuhlala azole, kwaye akaze ayeke ukubuza imibuzo. Kuya kufuneka enze kakuhle esikolweni kuba ukuziphucula kuphezulu kuluhlu lweenjongo zeMonkey. Yazi, ukuze ubukrelekrele bungazichaza njengokuba iklasikhi iklasikhi, kodwa inkawu inomtsalane kangangokuba akukho mntu ubonakala ngathi ucinga.
Iimpawu eziqhelekileyo ababelana ngazo abantwana beenkawu zibandakanya ubuqili, ubunyani, ubukrelekrele, ukwazi, ukujolisa kwisicwangciso-qhinga, ubutyebi, ukwahluka, ithamsanqa kwaye wonwabile. Abahlobo abalungileyo beMonkey yi Dragon kunye neRat, bobabini abanokuthi baqhubeke nezimvo zakhe ezintsha.
Cofa ukuze ufunde ngakumbi ngobuntu, iimpawu, kunye neempawu ezikwi Umntwana waseTshayina weZodiac Monkey .
Abantu be-Rooster banobugqwetha kwaye bathanda nantoni na ebatsalela ingqalelo.
AmaTshayina amaZodiac Rooster abantwana anecala le-Yin kunye ne-Metal Element. I-Rooster iyathetha kakhulu malunga nezimvo zakhe, nokuba zingahle zibonakale njani kwabanye. I-Rooster iphupha elikhulu kwaye ayinaloyiko lokuhlanganisa isicwangciso esona senzo sokufumana oko bakufunayo. Bazali: UMqhagi omncinci akoyiki ngoko lungeleni ukulungela ezo zinto zoncedo likaxakeka
Ukususela ebutsheni u-Rooster unenkani, ngakumbi xa kufikwa ekuvumeni ububi okanye impazamo. Ufuna ukukhanya njengelanga abulisa rhoqo kusasa, elibhiyozela ngenqatha eqhayisayo. Kwelinye icala, u-Rooster uhlala efumana iqonga leziko, abathandayo. Ukuba liziko lokuqwalaselwa kuyavumelana noMqhagi.
Ngaphandle kwayo yonke i-bluster Rooster ngumhlobo ozamile kwaye uyinyani. Njengee-knights zakudala uya kukhwela ehlangula imeko ngeengcinga ezomeleleyo kunye nokuzimisela. Rhoqo kunokuba kunjalo, loo migudu iba nemiphumo emihle. Akukho nto ingaphandle kokufikeleleka komqhagi xa bekwi-mission.
Iimpawu zobuntu ekwabelwana ngazo ngoRoster abantwana zibandakanya uburharha, ukwazisa, ukukhuthala, ukungakhathali, ububele, iintliziyo, umdlalo ococekileyo nonxibelelwano. I-Ox kunye neNyoka zenza amaqabane alungileyo kuMqhagi wakho omncinci.
Cofa ukuze ufunde ngakumbi ngobuntu, iimpawu, kunye neempawu ezikwi Umntwana waseTshayina weZodiac Rooster .
Njengoko unokulindela, abantwana beNja bafana kakhulu noogxa babo be-canine. Bayathandeka, banobuhlobo, bathembekile kwaye bazinikele. Inja luluntu ngokwasendalweni ukusuka kwinyathelo lokuqala abalithathayo ukuya phambili. Bafuna ukukhonza nokunceda, kwaye babonelele ngothando kunye noncedo ngaphandle kwengcinga yokuhlawula.
Inja inokukhathazeka ngezinto ezincinci. Uyazi ukuba inja yakho yasekhaya ikhala njani naxa uhambe imizuzu nje embalwa? Olo hlobo lokungaqiniseki lujikeleze iNja yoMntwana. Abazali banokunceda ngokwazisa umntwana ukuba bayathandwa, bayaxatyiswa kwaye ikhaya labo likhuselekile.
Umdlalo olungileyo ulungile kwindawo yeenja. Lo mntwana ukholelwa kubulungisa kwaye wonke umntu kufuneka acoce ukuba umoshile. Olu luvo olomeleleyo kwinja kwaye edla ngokudibana nokudana. Zisa umntwana wakho omncinci ukuze bazi ukuba abantu abasoloko benoxanduva njengaye.
Ezinye iimpawu ezibonakalayo kubantwana bezinja zibandakanya ukunyaniseka, ukunyaniseka, ukuhlekisa, isimilo esomeleleyo, ububele, ukuthetha phandle, ubuchule bokuxolela kunye nokuxolela. Oontanga abazalwe ngonyaka weHashe, uMvundla okanye iTiger benza izihlobo ezilungileyo kulo mntwana.
Cofa ukuze ufunde ngakumbi ngobuntu, iimpawu, kunye neempawu ezikwi Umntwana waseTshayina weZodiac .
Ingulube ye-Zodiac yaseTshayina / Umntwana weBhokhwe
Abantwana abazalwe ngonyaka wehagu banesimo seYin kunye namanzi. Lo mntwana sisidalwa sentlalo kakhulu esonwabelwa ngumntu wonke. UPiglet ukhuthele, ukhaliphile kwaye uzinzile kuyo yonke into ayenzayo. Uyakuthanda ukusebenza kakhulu ngokudlala, kwaye njengoko ekhula unokukhulisa ibug yokuhamba.
Xa abanye benikezela, ihagu iya isomelela. Njengomzali uyakufumanisa umntwana wakho ethatha isikhokelo ngovuyo. Nje ukuba kufezekiswe iinjongo kufuneka zinconywe kunye nokuziphatha okufanayo kukhuthazwe. Oku kudibana nomsa omkhulu obonakala ungenasiphelo. Konwabele ukwangiwa!
Ihagu encinci ngamanye amaxesha iziva indala ngendlela ebambelela ngayo kwiinkolelo nakwizithembiso. Akukho ndawo yenkohliso kwihlabathi leehagu, okuthetha ukuba uMama noTata kufuneka badubule esinqeni. Nika umntwana wakho inyaniso ngothando kwaye uya kuba nolwalamano oluqinileyo ebomini.
Ngokubanzi, unokuthembela kubantwana beeNgulube ukuba bahlale belula, bomelele, behlelekile, benomdla, benomonde kwaye 'ngumntu olungileyo'. Abahlobo abakhulu behagu baquka uMvundla neegusha.
Cofa ukuze ufunde ngakumbi ngobuntu, iimpawu, kunye neempawu ezikwi Ingulube yaseTshayina Zodiac Pig .
leo indoda kunye ne-aries yomfazi ebhedini
Chaza zonke iiplanethi ngokulandelelana kwazo
lithetha ntoni ivuko elityheli ngokomoya